कसरी हुन्छ मिडियामा महिलामाथि दुर्व्यवहार? — संगीता लामा | नेपाल इटाली डट कम
कसरी हुन्छ मिडियामा महिलामाथि दुर्व्यवहार? — संगीता लामा
September 29, 2012 — nepalitaly
मिडियामा महिलाको संख्या न्यून रहेको मात्र होइन, समाचार कक्षको वातावरण पनि अझै महिलाका लागि सहज र सुरक्षित बन्न सकेको छैन। सञ्चारकर्मीबाट एक महिलाउपर भएको भनिएको हिंसाजन्य घटनाका सम्बन्धमा परेको उजुरी र सञ्चारगृहमा हुने लैंगिक हिंसाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न डा. रेणु राजभण्डारीको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्रीबाट अध्ययन समिति गठन भएको थियो। २०६९ साउन ११ मा अध्ययन समिति गठन भएको समितिले कार्यादेशबमोजिम दुई दिनपछि कार्य प्रारम्भ गरेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालय, पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलका प्रतिनिधि रहेको सो ६ सदस्यीय समितिका सदस्यहरूले अध्ययनका क्रममा ७ वटा जिल्लाको भ्रमण गरेर करिब १५ वटा जिल्लाका पत्रकार महिलासँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा सहभागी अधिकांश पत्रकार महिलाले समाचार कक्षको वातावरण लैंगिक संवेदनशील नभएको र काम गर्ने वातावरण सहज नरहेको बताएका थिए। उनीहरूका अनुसार समाचार कक्षमा पुरुष पत्रकारको बाहुल्य रहने मात्र होइन, कतिपयले त्यहाँ मादक पदार्थ सेवन गरेर समेत आउने गर्दछन्। त्यसरी नै समाचार कक्षमा पुरुष पत्रकारहरूबीच अनौपचारिक कुराकानी हुँदा प्रयोग गरिने शब्द, वाक्य, भाषा र शैली अशिष्ट हुने र त्यस किसिमको कुराकानी तथा छलफल सुनेर काम गर्नुपर्दा मानसिक तनाव हुने पनि पत्रकार महिलाहरूको अनुभव छ।
अहिले जे जति महिलाहरू मिडियामा कार्यरत छन्, तिनीहरूलाई दिइने जिम्मेवारी पनि लंैगिक संवेदनशील छैनन् भन्ने बहस पनि पत्रकार महिलाहरूसँग भएको छलफलमा उठेको छ। जस्तो, महिलाले राजनीति, राजनीतिक दलका गतिविधि, व्यापार, खेलकुद र संसद् आदि विषयक समाचार ल्याउन सक्दैनन्, त्यसैले महिलालाई हल्काफुल्का विषयहरू जस्तो मनोरञ्जन, भान्छा, शंृगार, फेसन, जीवन–शैली, महिला बालबालिका, एनजीओले आयोजना गर्ने कार्यक्रम जस्ता बिट दिनुपर्छ भन्ने धारणा नेपाली पत्रकारितामा अझै कायमै छ। यस्तो सोच र परम्पराले गर्दा पत्रकार महिलाहरूले चाहेर पनि माथिका विषयहरूबाहेक अरू विभिन्न विषयवस्तुको रिपोर्टिङ, लेखन र सम्पादनमा खासै कलम चलाउने अवसर पाएका छैनन्। उनीहरूले अझै पनि सीमित विषयवस्तुमा संकुचित भएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
एकातिर पत्रकार महिलालाई महिला बालबालिका, मनोरञ्जन आदि विषयको समाचार ल्याउने जिम्मेवारी दिने र अर्कोतिर ती विषयका समाचारलाई गम्भीर ढंगले नलिने प्रवृत्ति केही पत्रकारहरूको छ। खासगरी महिला बालबालिका र अन्य कतिपय विषयहरू एनजीओ खोलेर डलर खेती गर्ने महिलाहरूले उठाएका मुद्दाहरू हुन् भन्ने धारणा राख्ने पत्रकारहरू पनि छन्। पत्रकार महिलाहरूसँगको छलफलका क्रममा उनीहरूले सुनाएका अनुभवहरू जस्ताको तस्तै:
‘हामीले ल्याएको समाचारलाई महत्त्व नै दिँदैनन्। हामीलाई महिला बालबालिका र अरू एनजीओको समाचार खोज्न विभिन्न कार्यक्रममा पठाउँछन् र समाचार ल्याएपछि जिस्क्याएर ‘एनजीओले तिमीहरूलाई पैसा पनि दियो होला नि’ भन्छन्।’
‘टिभीमा महिलाले चाहेको वा अलि चुनौतीपूर्ण वा राम्रो बिटमा काम गर्न दिइँदैन। हिजोआज टिभीमा जेपीटी (जे पायो त्यही) जेपी (जानै पर्ने) जस्ता शब्दहरू अनौपचारिक रूपमा प्रयोग हुन्छन्। महिलाले ल्याएको समाचार चाहिँ जेपीटी न्युज हुन्छ।’
‘न्युज रुम र न्युज रुमबाहिर पुरुष पत्रकारहरूले प्रयोग गर्ने भाषा अशिष्ट, अभद्र र पत्रकारिताको मर्यादाविपरीत छ। कतिपय सम्पादक र डेस्क सम्पादकले समेत समाचार जस्तो विषयलाई पनि ‘क्या दामी माल छ’ भन्ने गर्छन्। फोनमा कुराकानी गर्दा सबैले सुन्ने गरी ‘आज के समाचार छ’ भन्नुको साटो ‘आज के माल छ’ भन्छन्।’
‘कुनै पत्रकार महिलालाई उसको पछाडि ‘त्यो वेश्या हो, त्यसको कुरै नगर्’ भनेर हामीलाई सुनाउँछन्। कुनै केटीको ग्ल्यामरस फोटो हामीलाई देखाएर यो माल त क्या दामी छ भन्ने गर्छन्।’
‘एकजना सहकर्मी पुरुषले रक्सी खाएको बेला एकजना पत्रकार महिलाको हात समात्यो। सायद उसले धेरै दिनदेखि त्यस्तो क्रियाकलाप गर्ने मनमा राखेको थियो, तर रक्सी खाएपछि मात्र उसलाई त्यस्तो कन्पि्कडेन्स आयो।’
‘समाचार लेखेकै कारणले म पीडित भएँ। मैले यौन–दुर्व्यवहारसम्बन्धी लेख लेखेकै कारणले पुरुषहरूले ‘ल, अब त महिलालाई हेर्न पनि नहुने भयो! ल, हामी पछाडि फर्केर बस्छौं, तपाईंलाई हेर्दैनौं। ल अब त छुँदा पनि यौन–दुर्व्यवहार हुने भयो, हामी अलि टाढै बस्छौं। अब सबै
पुरुषहरू जेल जाने भए, त्यसैले नेपालमा अब स्कुल होइन जेल खोले हुन्छ’ भनेर जिस्क्याएर मानसिक यातना दिए।’
‘मिडिया हाउसमा हामीलाई पत्रकार होइन, महिला अधिकारवादीको ट्याग दिने गर्छन्। मैले बच्चा सानो र घर टाढा भएकाले साँझ ८ बजेअघि नै घर फर्कन पाउने गरी ड्युटी मिलाउन पाए हुन्थ्यो भनेर सिनियरलाई अनुरोध गर्दा लौ यस्तो महिला अधिकारकर्मी भएर पनि त्यसो भन्ने भनेर उडाइयो।’
« खसबाहुनको जिब्रो चाहिँ नक्कली ?
बाहुनहरुको दिग्दारलाग्दो बिगबिगी »